Geeska Afrika oo la siinayo gargaar - BBC News Somali
Geeska Afrika oo la siinayo gargaar
Image caption Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon.
Hogaamiyayaasha Qaramada Midoobay, Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta ee Islaamka, Midowga Yurub iyo hayado kale ayaa bilaabay booqasho ay ku tagayaan Geeska Afrika.
Midowga Yurub iyo, Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta ee Islaamka, iyo Bangiga Horumarinta Afrika ayaa ku dhawaaqay maanta gargaar cusub oo ay siinayaan Geeska Afrika oo gaaraya in ka badan 8 bilyan oo dolar sanadaha soo socda.
Gaargaarkan ayaa la siin doonaa dalalka Geeska Afrika oo ay kamid yihiin Soomaaliya, Djibouti, Eritaria, Kenya, Koonfurta Sudan, Sudan iyo Uganda.
Bangiga Adduunka ayaa sheegay inuu dhiibayo $1.8 bilyan, Midowga Yurub waxay sheegeen inay gobolka siinayaan $3.7 bilyan ilaa 2020. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa balanqaaday $1.8 bilyan oo uu siinayo dalalka Geeska Afrika saddexda sanno ee soo socota.
Bangiga Horumarinta ee Islaamka ayaa ku dhawaaqay gargaar lacag dhan $1 bilyan oo dollar oo uu siinayo afarta waddan ee Djibouti, Soomaaliya, Sudan, iyo Uganda.
Gudoomiyaha Bangiga Adduunka Jim Yong Kim, ayaa sheegay "lacagtan cusub waxay caawin doontaa fursad ay dadka Geeska Afrika ay ku helaan biyo nadiif ah, cunto nafaqo leh, adeeg caafimaad, waxbarasho iyo shaqo."
Ban ki-Moon oo hagaaminaya booqashada Geeska Afrika ayaa sheegay "Waddamada Geeska Afrika horumar ka sameeyay dhaqaalaha iyo degenaanshaha siyaasada, hadda waxay tahay waqti la taageero dadaalkan iyo in la dhameeyo dagaalka iyo saboolnimada oo loo gudbo horumar joogto ah."